Akụkọ - Ole na-arụ ọrụ igwe mgbawa ọhụrụ arụchara na mbido Nọvemba
* Ọrụ nkwalite na nwughari nke ahịrị ịgba agba agba maka ndị ahịa Xuzhou gafere nke ọma ma nyefee ya maka ojiji, nke onye ahịa ghọtara nke ọma.
• Ụlọ ọrụ ndị ahịa: ụlọ ọrụ ihe ọkụkụ;
• Ngwa ụdị: turntable shot blasting igwe;
• Ogologo oge ọrụ: ọnwa atọ.
*Shandong Jining elu-ọgwụgwụ alloy nkedo ogbugba ogbunigwe igwe oru ngo a bụ maka ọrụ ikpeazụ na inye ọrụ, yana nkwado zuru oke nke ngalaba injinia na ngalaba ọrụ mgbe emechara ahịa iji hụ na enwere ike itinye ndị ahịa n'ọrụ nke ọma ozugbo enwere ike.
• Ngwa ụdị: nko shot blasting machine (4 sets);
• Ogologo oge ọrụ: ọnwa 5.
*Emechaala ihe arụrụ arụ nke igwe agba agba agba agba agba nke ọma, tinyekwa sistemu a na-ahụ maka ime ihe dịka mkpa ndị ahịa siri dị, ọrụ inye ọrụ na saịtị na-aga n'ihu.
• Ụlọ ọrụ ndị ahịa: ụlọ ọrụ mmepụta ihe;
• Ụdị ngwá ọrụ: table roller na-agafe igwe na-agbawa agbawa (2 sets);
• Ogologo oge ọrụ: ọnwa 1.5.
Kemgbe Jenụwarị 2021, TAA ebupụtala ọtụtụ igwe na-agbawa agbawa, gụnyerehiweụdịigwe agba agba agba, rolaebu ogbugba ogbugba igwe, site na ụdịigwe gbawara agbawa, drumụdịigwe gbawara agbawa,imechaigwe gbawara agbawa, uzuzu uzuzu ụdị akpa, wdg. ndị a na ngwá na-eji injinia ígwè, ígwè, mmiri engineering, ọhụrụ ike ugbo ala na ndị ọzọ na ụlọ ọrụ, na-eweta ndị ahịa mma gbara agbawa mmetụta na ala uzuzu emission mmepụta gburugburu ebe obibi.
N'ihi mmetụta nke ọnọdụ ọrịa na-efe efe na ihu igwe oyi, yana nchebe gburugburu ebe obibi na iwu mgbochi ike, ọnọdụ ọkọnọ na oyi nke afọ a dị njọ karịa mgbe ọ bụla.Ọ dabara nke ọma, anyị akwadola n'oge: na mgbakwunye na mmepe nke mmemme dị iche iche, anyị akwadola ụdị nchara niile, akụkụ ọkọlọtọ na akụkụ mapụtara nke igwe gbawara agbawa nke enwere ike iji na nrụpụta iji hụ na mmepụta.
Anyị ga-arụsi ọrụ ike ibuli ihe onwunwe, itule mmepụta na ahịa, nọgidere na-emeziwanye mmezi larịị nke keukwu ọrụ management nke elu ọgwụgwọ, n'ihu ebuli na melite ọkọnọ mmesi obi ike atụmatụ na oyi, iji hụ na mmepụta na ọkọnọ nkeigwe agba agba agbaakụrụngwa,mgbawaabrasives, ngwa na ngwaahịa ndị ọzọ!